အားလပ်ချိန် - Bezzia | Bezzia
El အားလပ်ချိန် လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရည်စူးကြောင်းမဆိုလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ် အချိန်အား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်စရာကောင်းစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများကိုအသုံး ၀ င်ရန်အမျိုးသမီးများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအဆိုပြုချက်များကိုမီးမောင်းထိုးပြလိုပါသည်။ ၎င်းတို့တွင်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သောရုပ်ရှင်၊ စာအုပ်များ၊ ပြပွဲများသို့မဟုတ်တေးဂီတအစီအစဉ်များ။
ထို့အပြင်စပိန်နိုင်ငံရှိကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်ပါတီများကဲ့သို့သောအခြားလှုပ်ရှားမှုများအတွက်နေရာလည်းရှိလိမ့်မည် ခရီးသွား, မည်သူမဆိုများအတွက်သာယာသောလှုပ်ရှားမှု။
ထို့အပြင် အာရုံfemတ္ဖြစ်လိမ့်မည်အမျိုးသမီးများ၏အရသာနှင့် ဦး စားပေးမှုကိုအလေးထားသော်လည်းမိသားစုတစ်စုအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သောအစီအစဉ်များကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအတွက်ရုပ်ရှင်၊ ပညာရေးပြပွဲများ၊ မိသားစုတစ်ခုအနေဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည့်သို့မဟုတ်မိသားစု၏အဏုမြူရေးအတွက်အကြံပြုသည့်ခရီးစဉ်များကိုသင်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်အပြင်၌လုပ်ရမည့်လှုပ်ရှားမှု ၄ ခု
ကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ ခေတ်ဆန်သော ၀ ါသနာ
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကရိုးရာအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး၎င်းတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သောအခန်းကဏ္ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီစိတ်ဝင်စားမှုက ...
အိမ်မှာအားလပ်ရက်များ - အလုပ်များစေရန်သော့များနှင့်အစီအစဉ်များ
၂၀၂၁ သည်လွယ်ကူသောနှစ်မဟုတ်။ ကပ်ရောဂါမှရရှိသောကန့်သတ်ချက်များနှင့်စီးပွားရေးမရေရာမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းအားပေးနေသည်။
အခုရာသီဥတုကောင်းလာပြီဆိုတော့နွေရာသီကိုအခွင့်ကောင်းယူဖို့အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဘယ်လိုလဲ? အစီအစဉ်များကိုခံစားနေရသည် ...
မာရီလင်မွန်ရိုးကသူမ၏စံနမူနာများကိုခုခံကာကွယ်ကာတက်ကြွလှုပ်ရှားမှုများသာမကယနေ့သင်ခန်းစာများစွာနှင့်ပြည့်နေသည့်ဘ ၀ ကိုနေထိုင်ခဲ့သည်။
ဆောင်း ဦး သည်ခြေထောက်ပေါ်တက်လာပြီးမင်းကုမ္ပဏီ၌ကောင်းသောအချိုရည်ကိုသောက်လိုလျှင် (သို့) သင်၏အစည်းအဝေးများတွင်ပြင်ဆင်ပါက ...
သင်၏မိတ်ဆွေများသည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်အဘယ်ကြောင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပြောရသနည်း
por ဒိုင်ယာနာမီလန် လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
သင်၏အချက်အပြုတ်ဆန္ဒစာရင်းတွင်မည်သည့်သြစတြေးလျအစားအစာများသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဤဆောင်းပါးသည် ...
မင်းကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင် ၅ ခု
အကယ်၍ သင်သည်ယခုပင်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက၊ အားကြီးသောအမျိုးသမီးများနှင့်အရေးကြီးသောပြissuesနာများအကြောင်းဤမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောရုပ်ရှင်များကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်။